Ogaden News Agency (ONA) – Q2aad : Dawlad Horumartay dadkeedu ma qashinkay cunaan – By Xassan Macallin
Q2aad : Dawlad Horumartay dadkeedu ma qashinkay cunaan – By Xassan Macallin
Posted by ONA Admin	/ May 2, 2013
Horumarka Kale ee isna la Sheegayo inuu Ogadeniya Kajiro.
Arintani dood badan uma baahna ayaad moodaa, mar haddii aynu aragnay siduu dhaqaalaha wadankii haystay Ogadeniya uu saas yahay akhristow maxaad kafili midkii lahaystay. Bal dhawr qodob ooy Ethiopia kufaanto aan xusno.
Horta marka hore dhibaatada Ogadeniya kajirtaa ama waligeed kajirtay ma ahayn mid horumar kusaabsan ee waxay ahayd wadan lagu soo duulay oo laqabsaday. Waxaana laga dagaalamayaa gunnimo waxaana loo dagaalamayaa gobonimo, waxaana naf iyo maalba u huray dad aad utiro badan ilaa & haddana sidii ugu huraya. Marka labaad bal aan haddana eegno doodaha raqiiska ah ee la doonayo in gumaysiga lagu sharciyeeyo. Tusaale ahaan;
Waxaa lagu dhihi jaamacad baa Jigjiga laga dhisay.
Waa sax in jaamacad ay kutaalo Jigjiga laakiin su’aashu waxay tahay yaa jaamacadaas wax ka barta ?Jawaabtu way dhibyartahay jaamacadani dalka Ogadeniya ha kutaalo lakiin waxay ka dhaxaysaa Ethiipia oo dhan oo sheeganaysa inay kumayaal sano dawlada ahayd. Ardayda Somalida ah ayaana ugu yar inta dhigata oon waliba loo ogolayn takahsuska muhiimka ah (Akhri). Waxaa Ogadenya ka jamacado badan Soomaliya oo ayna dawladi ka jirin sida Hargaysa, Boorame, Grawo Muqdisho & Boosaaso lamana buun buuniyo waayo waa wax uu qof kasta oo aduunka joogaa uu xaq uleeyahay waana xaquuq asaasi ah (Basic Universal Rights) in dawladda dalkaa ka talisa ay ubadka soo koraya waxbarto.
Sidoo kale wadada Jigjiga dhex marta ee ka bilaabma Kelaga dhinaca Karamardha ilaa & Jibriga Jigjiga (Andanya Mangadh) haddii laami laga dhigo ma waxa la odhan karaa wadanka baaxadiisu la’egyahay qiyaas ahaa wadanka Germay horumar baa ka jira? Wadada Jigjiga ilaa Shaygosh ee laamida laga dhigay waa tii uu Talyangu ka tagay oo hadda Shiinuhu laami saarayo ee mudada 10ka sano ah socota iyaduna ma waxaa ladhihi karaa waa horumar? Isgaadhsiinta technolgy-yada aduunku & wakhtigu (Time & Space) ay keentay in Mobile-da ay ku faanan anagoo ogsoon Somaliya oon dawladi kajirin 22 sano ay 3G mobile geela lagu raaco.
Shiinuhu wuxuu udhisayaa wadadaa dan ayuu ka leeyahay si uu shidaalka & khayraadka dabiiciga ah oola soo boxo isla markaana dhulka dihin ee Ogadeeniya oola wareego sidii ku dhacday gobolada Gambella & Canfar.
Kaligii taliyhii Hitler ayaa wuxuu dhisay Jidka Europe isku xidha oo qiyaas ahaan gaadhi kara 4000 oo KM. Umuusan dhisin inuu hadiyad u siiyo wadamada Europe. Sidoo kale Talyaaniga ilaa Finland. Wuxuu u dhisay ma ahayn inuu wadamadaas caawiyo ee wuxauu udhisay si uu cidamadiisa taakulayn (Supply) dagdag ah u gaadhsiiyo.
Haddaan eegno kaabayaasha dhaqaalaha Ethiopia waxaan horay usoo sheegnay dakhliga canshuuta ee wadanka soo gala wuxuu kasoo galaa inta ugu badan gobolada Somalida Ogadeniya 65%. Haddii taasoo kaliya loo daayo ayaa inta hada Budget ahaan sanadkii loo siiyo 3 jeer kabadan, markaas ayaa lagu dhihi Budget aanan waligano Ethiopia kaheli jirin baan nalasiiyaa. Sidaan lawada socono wadanku wuxuu noqday (Landlocked) wadan aan bad lahayn, taas ayaa keentay inay canshuurta gobolada Somalida soogasha inay kor u kacdo ileen wadanku dakado kale malehee.
Wadanka Ogadeniya waxaa kajira cunoqabatayn dhinac walba ah hadday noqoto ganacsiga ama saxaafada. Waxaa kaloo intaas dheer in dhulkii ay lahaayeen ummada wadanka daganayd quruumaha la boobayo oo lasiinayo dad kale oo sababo kale oon ummadaahaa dan u ahayn loosiinayo. Dhaqaalo xumida Ethiopia ka jirta ayaa waxay saaamayn wayn kuyeelatay maamulka Kililka taasoo ay bilaabeen inay dadka wadanka dagan kukhasbeen inay Gibir aysan awood ulahayn lasaaro, waxaana oogu dambaysay Gibir kan oo kale in laqaado wakhtigii Xayle Silaase.
Waxyaabaha ay ku doodaan kuwa gumaysiga u jixiya waxaa ka mid ah nidaamka federaalka lagu tilmaamo oo la leeyahay qawmiyad walba iyadaa is xukunta. Ugu horeyn Ethiopia inay sidaas noqoto waxaa keenay wakhtiga iyo wacyiga jira. Haddii uusan Tigre sidaas yeelina wadanka hal sano ma haysan kareen. Hadana wuxuu ku haystaa inuu qawmiyad walba u dhiibo koox danaha Tigreega u ilaaliya, iyagana ay ku taageeraan inay xukumaan waxay ugu yeedhaan Kililada. Waxaa tusaale fiican u ah arimaha hadda ka socda Ogadenya oo koox Cabdi iley uu hogaaminayo ay Itobiya ku xasuuqayso shacabka Somaliyeed ee Ogadenya. Dhamaan qawmiyadaha kalena waa inala mid inkastoo horjoogayaasha gumaysiga ay ku kala duwan yihiin heerka wadaninimadooda iyo aragti dheeridooda. Waxaa laga yaabaa meesha uu Cabdi iley ku mashquulsan yahay laynta shacabka iyo laaluushka uu siinayo saraakiisha Tigreega inay maamulada ka dhisan qawmiyadaha inala dariska ah ay ku mashquulsan yihiin horumarin dhab ah iyo iska caabinta qawmiyadaha kale.
Isku soo duuduubo waxaa la yidhi quraanka waxaa isku fuuqfuuqsatay (Kufua’an Axad) ee meesha haddii aysan cadaaladi kajirin nabadgalyo kama jirayso hadaysan nabadgalyo kajirina wax horumar ah kama jiri karo (If there is no justice there will be no peace and if there is no peace there will be no development). Ilahay ayaa quraankiisa ku sheegay ”Wa laqad karamnaa banii Aadam (as). Banii Aadamkii uu ilahay kaaramada siiyay ayaa maalin walba si,aan sharci ahayn oonan halkan kusoo koobi karin loola dhaqmaa. Dadka shacabka ah ayaan agtooda aan qiimo badan kulahayn oo inta ladilo maydkooda banaanka lasoo dhigaa maalin kasta. Guud ahaan xaalada wadanku waa saas ee fadlan daawada sawiradan hoose ee kutusaya nolosha dhabta ah ee kajirta Jigjiga ee aysan run ahayn waxyaabaha Universal TV iyo ESTV laga siidaayo.
War bixinadaas tacadiga shacbiga Ogadeniya lagu hayo waxaad ka heli kartaan warbixinada ay soo saaraan UNDPO, Amnesty International, Human rights watch, Genocide Watch, ARAM & xataa war bixintii sanadkan ee dawlada Marykanku soo saartay. Halkan Riix
Q1aad ee Maqaalkan.
Qore : Xassan Macallin.